Kukhalwa ngehlathi ‘elinenkungu ekhulumayo’ eNkandla | News24
Kukhalwa ngehlathi ‘elinenkungu ekhulumayo’ eNkandla
Durban – Umphakathi waseMzimhlophe esigodini saseQhudeni, eNkandla, ukhala ngehlathi eliyinkinga okuthi uma uke wangena kulo kunenkungu ekhasa phansi kube nzima ukubona indlela egodukayo, umqondo udideke ugcine usudavuza ungazazi ubheke kuphi.
Isigameko sakamuva sokuduka komuntu kuleli hlathi senzeke ngoLwesithathu olwedlule ngesikhathi kuduka uMthobisi Ntuli, 17, wakhona eMzimhlophe obehamba nabangani bakhe beyolanda izinkomo emadlelweni, waze watholakala ngoLwesihlanu.
Elandisa iZindaba24 uthi inkinga yadalwa ukuthi wasalela ngemuva ebafaneni ayehamba nabo ngoba ihhashi lakhe lase likhathele futhi nenduku ayeyiphethe yabe isiphukile.
“Ngangingaqali ukuhamba kuleliya hlathi, inkinga wukuthi ngasala kulaba engangihamba nabo ngenxa yokuthi ihhashi lami labe selikhathele. Ngangithi ngiyanqamulela kanti sengizoduka kakhulu ngaze ngagcina sengisendaweni engingayazi,” echaza.
UMthobisi uthi ngokubona kwakhe inkungu ekhona kuleliya hlathi ihambisana nemimoya emibi.
“Ngicabanga ukuthi le nkungu ihambisana nezilwane ngendlela okwenzeka ngayo kimi futhi uma usehlathini kuba sengathi iyakhuluma le nkungu. Kuba sengathi kukhona umuntu ozoqhamuka kodwa kugcine kungavelanga muntu, kepha amazwi ayezwakala,” kulandisa uMthobisi.
Uthi wahlala izinsuku ezintathu engayiboni indlela, wasizwa nawukuthandaza ngesikhathi kuqhamuka izingulube zehlathi, ngaleyo ndlela zangamlimaza.
“Indlela ngayibona ngoba sekuphume ilanga kwazise ngaduka izulu liguqubele,” esho.
OLUNYE UDABA: Kushone oyedwa kwalimala abangu-60 kushayisana 29 wezimoto eGoli
Umalume kaMthobisi, uThemba Ntuli, uthi kwabathusa kakhulu ukuduka kwalo mfana izinsuku ezimbili. “Waduka ekade ehambe ekuseni nabanye abafana. Sambheka sancama waze waziqhamukela yena ngemuva kwezinsuku ezimbili. Sathi sibuya ezintabeni ukuyomthungatha samthola esesekhaya,” esho.
Uthi kwadingeka amthathe amphuthumise esibhedlela ukuze ayothola amaphilisi nomjovo ngoba wahlala isikhathi eside eqhuqhwa amakhaza ehlathini. Ngemuva kwalokho uthi wamyisa enyangeni ukuba iyombhemisa ukuze imukhiphe imimoya emibi yehlathi nezintaba ngoba wayethuka ebusuku.
Ikhansela lakuwadi 8 ngaphansi kukaMasipala waseNkandla, uMaviyo Mbuyisa, uveze ukuthi indaba yenkungu yiyo eyinkinga kule ndawo.
Ube esexwayisa abantu ukuba bangahambi ngakuleli hlathi uma bebona inkungu ukuthi iyaqala iyavimbanisa.
“Uma kuqala inkungu abantu siyabanxusa ukuba babuyele emakhaya ngokushesha ngoba uma libalele ayikho inkinga ebikwayo ngaleli hlathi. Inkungu inokuqala esikhaleni nje, siyacela ukuthi uma iqala abantu besendleleni, kuhle bajike kusekuhle,” esho.
Uphinde wathi kwesinye isikhathi le inkinga inezezelwa ngabantu abashonela kuleli hlathi bese bengalandwa.
“Leyo mimoya ibe isihlupha abantu ngokubapokela njengoba bethi nje bezwa le nkungu kungathi iyakhuluma,” kusho uMbuyisa.
Induna yendawo uNgqondo Buthelezi uveze ukuthi le nkungu kudala yaqala ukuba yinkinga, akuyona into entsha.
“Yinto endala leyo, inkungu kade vele yaqala ukusihlupha. Uma ingekho inkungu akukho muntu odukayo, kepha uma ike yaqala yaqoqana baduka impela, abanye baze balale khona ehlathini,” kusho uButhelezi.
Uthi akukho ukugwema le nkinga yokulahleka kwabantu kuleli hlathi ngaphandle ngokuthi uma kukhona inkungu bangangeni kulo.
“Abantu baduka uma kukhona inkungu kuphela, uma ingekho akubikwa lutho. Abantu balahleka ngoba inkungu isuke imnyama bhuqe, ungasaboni ngisho umunwe wakho imbala,” ephetha.